Yakasimbiswa Procaine Benzylpenicillin Yakagadzirirwa
Yakasimbiswa Procaine Benzylpenicillin Yemukati Injection Inoumba: Eeach vial ine: Procaine penicillin bp ... Pharmacological chiito Penicillin mushonga wechipfuva-chinorwisa mabhakitiriya unoshanda zvakanyanya pane akasiyana-siyana egiramu-yakanaka mabhakitiriya uye zvishoma gramu-isina cocci. the main sens ...
Diminazene Aceturat uye Phenazone Granules yeIn injion
Diminazene Aceturate Uye Phenazone Powder Yemajekiseni Kuumbwa: Diminazene aceturate ………………… 1.05g Phenazone ... kurwisa babesia, piroplasmosis uye trypanosomiasis. Zviratidzo: Prophylactics uye kurapwa kwevacheya, piroplasmosis uye trypanosomiasis mune ngamera, mombe, kitsi, imbwa, mbudzi, bhiza, gwai nenguruve. Contraindication: Hypersensitivity yekudzikisa kana phenazone. Administ ...
Ceftiofur Sodium yeIn injion
Ceftiofur Sodium Yemajekiseni Inoratidzika: Ichena kune yero poda. Zviratidzo: chigadzirwa ichi imhando yeantimicrobial mumiriri uye inonyanya kushandiswa mukurapa kwezvirwere mune shiri dzemukati uye mhuka dzinokonzerwa nemabhakitiriya anonzwa. Kune huku inoshandiswa mune ekudzivirira kwekufa kwekutanga kunokonzerwa neescherichia coli. Kune yenguruve inoshandiswa pakurapa kwezvirwere zvekufema (nguruve bacterial pneumonia) inokonzerwa neaccinocillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, salmonella c ...